Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » ह’त्यापछि आ’त्मह’त्या !
ह’त्यापछि आ’त्मह’त्या !
काठमाडौँ — पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीका घरेलु कामदारले उनकी पत्नी मुना कार्कीको ‘ह त्या गरी आत्मह त्या’ गरेका छन् । ललितपुर उपमहानगरपालिका–२, सानेपास्थित घरमा आइतबार बिहान कामदार विजय चौधरीले कार्कीको घाँ’टीमा डो रीले क’सेर र टा उ कामा पिर्काले हा नेर ह त्या गरी आ त्म ह त्या गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
प्रहरीका अनुसार घटनास्थल पुग्दा पूर्वसचिव कार्कीकी ४९ वर्षीया श्रीमती भान्साकोठामा र ग ता म्य अवस्था अ’चे’त फेला परेकी थिइन् । कामदार दाङ, लमहीका २२ वर्षीय चौधरी भने घाँ’टीमा हरियो नाइलनको डोरी क’सिएर मृ त अवस्थामा फेला परेका थिए ।
घटनाबारे सूचना पाएलगत्तै सानेपा वृत्तबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा एउटा टोली त्यहाँ पुगेको थियो । घटना हुँदा पूर्वसचिव कार्की पशुपतिमा रुद्री पूजा लगाउन गएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए । ‘कार्कीजी फर्किएपछि बी भ त्स दृ’श्य देखेर चि’च्या’उँदै बाहिर निस्कनुभएछ । त्यसपछि उहाँले वा छिमेकीमध्ये कसैले प्रहरीलाई खबर गर्नुभएछ,’ उनले भने ।
प्रहरीले सानेपाकै स्टार अ’स्पतालबाट ए’म्बु’लेन्स बोलाएर कार्कीलाई उपचारका लागि पठाएको थियो । ‘घ टनाबारे हल्लाखल्ला भएपछि जम्मा भएका छिमेकीमध्ये एकजना महिला चिकित्साकर्मी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले प ल्स भएको आशंका गरेपछि प्रहरीले अस्पताल पठाएको थियो,’ एसएसपी राईले भने, ‘तर अस्पतालले त्यहाँ पुर्‍याउनुअघि नै मृ त्यु भइसकेको बताएको छ ।’
प्रहरी पुग्दा कामदार चौधरी डाइनिङ कोठाको भुइँमा मृ त अवस्थामा ल डिरहेका थिए । ‘उसको घाँ टीमा नाइलनको हरियो डोरी बेस्सरी कसिएको थियो, उक्त डोरी माथि लबीको रेलिङमा बाँधिएको डोरी बाट छिनेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी अनुसन्धान गर्दैछौं । पोस्ट’मार्ट’मका लागि दुवै श व पाटन अस्पताल पठाएका छौं । अबेर रातिसम्ममा रिपोर्ट आउने सम्भावना छ । त्यसपछि केही निर्क्योल गरेर भन्न सकिन्छ ।’
महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका डीएसपी सन्तोष तामाङका अनुसार चौधरी २०६६ सालदेखि कार्कीको घरमा बस्दै आएका थिए । उनैले मुनाको ह ्या छि आ त्म ह त्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । ‘भान्साकोठामा रहेकी मुनालाई पछाडिबाट गएका चौधरीले घाँटीमा डोरी अल्झाएर लडाएपछि प्लास्टिकको पिर्काले टाउकोमा हानेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘घटना घटाएपछि वि क्षि प्त बनेका उनी आफैंले पनि डोरीको पासो लगाएर आ त्म ह त्या गरेको हुन सक्छ ।’
ललितपुरको सानेपास्थित पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको निवासमा घटनापछि सोमबार देखिएको भीड।
पूर्वसचिव कार्कीकी छिमेकी राष्ट्रिय सभाकी सांसद तथा गायिका कोमल वली कार्की चि च्या ए को सुनेपछि दाइसँग त्यहाँ गएकी थिइन् । कार्कीको घर वलीको ठीक पछाडि छ । ‘हामी पुग्दा ज्वाइँसाहब चि च्या इ रहनुभएको थियो, दाइले घर पुग्नुअघि नै प्रहरीलाई खबर गरिसक्नुभएको थियो । हामी भित्र गएर हेर्दा काम गर्ने केटो डाइनिङमा लडिरहेको थियो । भान्सामा गतको आ हालमा मुना लडिरहेकी थिइन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरी आएर हेरेपछि छिमेकी नर्स बहिनीले प ल्स चेक गरिन् । घाँ टीमा प ल्स रहेको जस्तो लागेको बताएपछि हामीले उनलाई तन्नामा बेरेर बाहिर निकाल्यौं र एम्बुलेन्समा हालेर अस्पताल पठायौं ।’ वलीका अनुसार पूर्वसचिव कार्की उनको टाढाको नातामा ज्वाइँ पर्छन् ।
स्टार अस्पतालका एमडी डा. शैल रूपाखेतीका अनुसार एम्बुलेन्स पठाइदिन फोन आएपछि चिकित्सकहरू पनि उपचारका लागि तयारी अवस्थामा बसेका थिए । ‘कार्कीलाई इमर्जेन्सीमा ल्याएलगत्तै डा. मन्जिता बज्राचार्यले उहाँको प ल्सलगायत जाँच गर्नुभयो, सबै नील थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरूले रि’भाइ’भ गर्न सकिन्छ कि भनेर सी’पी’आर (कार्डि’याक पल्म’नरी रि’सेस्टेसन– बन्द भइसकेको मु’टुलाई पुनः च लाउने प्रयास) गर्नुभयो । त्यो उहाँहरूले लगभग ४५ मिनेटसम्म कोसिस गर्नुभयो । त्यसपछि पनि रि भा इ भ भएन ।’
प्रहरीले अचेत अवस्थामा अस्पताल पठाएको भने पनि अस्पताल ल्याउँदा उनको मृ त्यु भइसकेको डा. रूपाखेतीले बताए । अस्पताल प्रशासनले सोही आधारमा ‘ब्र’ट डे’ड’ (अस्पताल ल्याउँदा मृ त्यु भइसकेको) भनेर ‘डे थ सर्टिफिकेट’ (मृ त्युको प्रमाणपत्र) जारी गरेको छ । ‘पछि अस्पतालका न्युरो सर्जनले पनि आएर टा उ कामा लागेको चो ट हेर्नुभयो, उहाँको भनाइअनुसार कुनै धार नभएको वस्तुले टाउकामा धेरै चोटि प्र’हार गरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्कीको घाँ’टीमा र हातमा डोरीले बाँधेको नी’ल’डा’म र दायाँ आँखा’मुनि काटेको दाग छ ।’
भान्सामा पिर्काजस्तो प्लास्टिकको हरियो सानो टुल टु क्रा टु क्रा भएको अवस्थामा फेला परेको घटना’स्थलमा सुरुदेखि खटिएकी ललितपुर परिसरकी एसपी तथा प्रवक्ता दुर्गा सिंहले बताइन् ।
‘त्यहाँ एक बन्डल नाइलनको डोरी पनि फेला परेको थियो, टेबुलमाथि दुईवटा मोबाइल र कैंची थियो,’ उनले भनिन्, ‘ग्यास स्टोभमाथि आलु बसालिएको थियो । साग पनि काटेर पकाउन ठि’ क्क पारिएको थियो । स्टोभमा राखेको कुकरमा पनि र गतका छि टाहरू देखिएका छन् ।’
सानेपा खरीबोटस्थित प्रहरी बिटको आडैबाट पश्चिमतर्फ छिर्ने गल्लीबाट लगभग २०० मिटरभित्र छिरेपछि पूर्वसचिव कार्कीको घर पुगिन्छ । प्रहरीका अनुसार बिहान कक्षा ५ मा अध्ययनरत १२ वर्षीय छोरालाई स्कुल पुर्‍याएर ड्राइभर फर्किएलगत्तै उनी त्यही गाडी लिएर पशुपतिनाथ मन्दिरमा रुद्री लगाउन गएका थिए । घर फर्किंदा बन्द गेट कसैले नखोलेपछि कार्की आफैंले गेट खोलेर गाडी पार्किङमा राखी भित्र प्रवेश गरेका थिए । घरभित्रको कोठामा बी भ त्स घ’टना देखेपछि उनी गलामा लगाएको रुद्राक्ष र सयपत्रीको माला तथा प्रसादको झोला भान्सामै फ्याँ’केर चि’च्याउँदै बाहिर निस्किएका थिए ।
प्रहरीले घटनापछि विक्षिप्त अवस्थामा रहेका कार्कीसँग सामान्य कुराकानी मात्रै भएको र बाँकी सोधपुछ छिट्टै गरिने बताएको छ । पत्नी मुनाको म हि ना वारी भएका कारण अर्जुन एक्लै पशुपति मन्दिर गएको प्रारम्भिक सोधपुछमा खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
परिसर प्रमुख एसएसपी राईका अनुसार घटनास्थलको मुचुल्का र ‘क्रा’इ’म सिन’ विश्लेषण गर्न पाटन अस्पतालबाट चिकित्सकहरूलाई बोलाइएको थियो । फ’रे’न्सि’क जाँचका लागि आएका चिकित्सकले मुनाको भ’जा’इनल स्वा’ब र चौधरीको वी’र्यको नमुना संकलन गरेका थिए । घटनास्थलमै प्रारम्भिक जाँचका क्रममा श्रीमती कार्कीले ‘से’ने’ट’री प्या’ड’ लगाएको देखिएको छ ।
कार्कीको घरमा ७/८ महिनाअघि चो री पनि भएको थियो । त्यसपछि उनको घर–कम्पाउन्डमा चारवटा सीसीटीभीसमेत जडान गरिएको थियो । यस्तै उनको घरमा जर्मन से फर्ड जातको ठूलो कु कु र पनि पालिएको छ । ‘चोरी हुँदा पनि यहाँ कुकुर थियो तर भु’क्दै भुकेन,’ छिमेकी वलीले भनिन्, ‘अहिले सोच्दा त्यो बेला पनि केही ग’ड’ब’ड भएको थियो कि जस्तो लाग्छ । त्यो प्रहरी अ’नु’सन्धानपछि प्रस्ट होला ।’
एसएसपी राईले कार्कीको घरमा चो’री भएका बेला ललितपुरमा कार्यरत प्रायः सबै प्रहरीहरूको सरुवा भएकाले उक्त फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिने बताए । ‘चो’रीको घटनाबारे हामीले पनि भर्खरै थाहा पाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको पनि अ’नुस’न्धान गर्छौं । मलाई लाग्छ बढीमा ५ दिनभित्र सबै कुरा छ’र्लंग हुन्छ ।’